လင်းဇော်ထိုက်: June 2012
မနေ့က တစ်နေကုန်ပင်ပန်းနေသဖြင့် ညပိုင်းတွင် ပုံမှန်အိပ်ယာဝင်ချိန်ထက်စောပြီးအိပ်ယာဝင်လိုက်သည်။ အဲဒီလို အိပ်ယာဝင်ချိန်စောသွားလို့လားမသိ
မနက်ပိုင်း အရုဏ်တတ်ချိန်တွင် လန်းလန်း ဆန်းဆန်းနိုးနေသည်။ ဆက်မအိပ်ချင်တော့၍ အိပ်ယာမှ ထကာ ခြံအပြင်ထွက်ပြီး လမ်းပေါ်တွင် အရုဏ်ဦး၏ ရူ့ခင်းတို့ကို ခံစားနေမိသည်။
မင်္ဂလာပါ ကျနော်တို့ မြန်မာ့အရုဏ်သစ် ပရဟိတ အဖွဲ့မှ ကြိုဆိုပါတယ်။
ကျနော်တို့ အဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ...
မြန်မာဟူသည့် ခေါင်းစဉ်အောက်ဝယ် လူမျိုး၊ ဘာသာမရွေး အခက်အခဲ ရှိသူကို ကူညီဖေးမရန်၊ အများကောင်းကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပြီး
လုပ်ငန်းစဉ် အနေဖြင့် --
အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ လစဉ်ပုံမှန်ထည့်ဝင်ငွေကို မတည်မည်။ ထိုမှတဖန် အလှူခံရသမျှကို ထပ်ပေါင်း၍ အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်သွားကြပါမယ်။
ဒီဂရုမှာ မန်ဘာဝင်လာတဲ့ မိတ်ဆွေများကို အမြူတေမန်ဘာ (Core Member) များအဖြစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါရန် ဖတ်မန္တကပြုလိုပါတယ်ခင်ဗျာ
အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်များမှ တစ်လ ကျပ်တစ်ထောင်ကျ မတည်၍ လည်းကောင်း၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင် လက်လှမ်းမှီသမျှ ကောက်ခံခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း အဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်သွားမည် ဖြစ်ပါတယ်။
အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ အလုပ်အမှုဆောင်များအဖြစ် တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုသူများကိုလည်း အစဉ် လက်ကမ်းကြိုလျက်ပါ ခင်ဗျာ...။
အမှုဆောင်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အီးမေးလိပ်စာမှာ Myanma.ArunThit@groups.facebook.com ဖြစ်ပါတယ်။
facebook ကတော့https://www.facebook.com/groups/340617269342614/ ပါ ပါဝင်ကျပါလိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ
Posted by linnzawhtike at 6/18/20120comments
The Nobel Peace Prize 1985-2011
The Nobel Peace Prize 1986 was awarded to Elie Wiesel.
The Nobel Peace Prize 1987 was awarded to Oscar Arias Sánchez "for his work for peace in Central America, efforts which led to the accord signed in Guatemala on August7this year".
The Nobel Peace Prize 1990 was awarded to Mikhail Gorbachev "for his leading role in the peace process which today characterizes important parts of the international community".
International Campaign Jody William
sto Ban Landmines (ICBL)
The Nobel Peace Prize 1997 was awarded jointly to International Campaign to Ban Landmines (ICBL) and Jody Williams "for their work for the banning and clearing of anti-personnel mines"
The Nobel Peace Prize 1998 was awarded jointly to John Hume and David Trimble "for their efforts to findapeaceful solution to the conflict in Northern Ireland"
The Nobel Peace Prize 1999 was awarded to Médecins Sans Frontières "in recognition of the organization's pioneering humanitarian work on several continents".
United Nations (U.N.) Kofi Annan
International Atomic Mohamed ElBaradei
Intergovernmental Panel Albert Arnold (Al) Gore Jr.
Ellen Johnson SirleafLeymah Gbowee Tawakkol Karman
Posted by linnzawhtike at 6/17/20120comments
လျှုဒါန်းနိုင်တဲ့နေရာများ ထပ်ဖြည့်ပေးပါရန်နှင် share ပေးကျပါရန်အနူးအညွတ် တောင်းဆိုပါသည်
(ရန်ကုန်အခြေစိုက် မြန်မာလူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့များသည် သဘာဝဘေးဒဏ်နှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေများကြုံလာတိုင်း စုပေါင်း၍ အများအားဖြင့်ကူညီခဲ့သည့်အလေ့အထများရှိပါသည်။ ယခုအခါ ရခိုင်မီးဘေး ဒုက္ခသည်များအတွက် လိုအပ်ချက်များရှိနေသည်ကိုသိရသည့်အတွက် လူငယ်အဖွဲ့များ စုပေါင်းကူညီပါမည်။
မတင်မြတ်ထက် (myanmar youths in action) ၀၉၇၃၁၁၇၈၄၉
ကိုသန့်ဇင်စိုး ( myanmar storytellers) ၀၉၄၂၅၀၁၈၄၇၆
ကိုဇင်ဖြိုးထက် ( voluntary internship program) ၀၉၅၀၄၁၆၄၇
ကိုခိုင်စိုးလင်း (myanmar youths in action) ၀၉၅၄၀၈၃၀၅
ကိုဇော်လွင်ဝင်း ( mutd) ၀၉၄၃၁၁၃၃၉၀
ကိုသီရိစု (BAD boys) ၀၉၅၁၁၉၈၂၈)
(ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်တွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများအတွင်း အိုးအိမ်ဥစ္စာများ ပျက်စီးရှူံးသွားရသော ဒုက္ခသည်များအတွက် အလှူငွေများအား ရခိုင်အသင်း(စင်္ကာပူ)သို့
ထည့်ဝင်ပေးလှူဒါန်းရန်အတွက် သဒ္ဒါတရားနည်းများမဆို လှူဒန်းလိုသော မိတ်ဆွေများအနေဖြင့် အောက်ပါဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဆက်သွယ်၍လှူဒန်းနိုင်ကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
လှလွန်းဆွေ - 9230 0580 .)
(ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင် ဖြစ်စဉ်များကြောင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ဖြစ်နေသော ပြည်သူများကို ကူညီထောက်ပံ့ရန်အတွက် ဒေသခံများဖြင့် ယာယီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ အဖွဲ့ကို လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း (စစ်တွေ) ဖုန်း ၀၄၃-၂၂၄၇၅, ဦးမောင်ထွန်းကျော် ၀၉၈၅၀၀၉၄၄၊ ဦးသန်းရွှေ ၀၉၈၅၀၀၂၄၁၊ ဦးရွှေထွန်းအောင် ၀၉၈၅၀၀၅၉၀၊ ဦးအောင်ကျော်ဇံ ၀၉၈၅၀၀၄၅၀ များသို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။)
Posted by linnzawhtike at 6/14/20120comments
တဲ့ ခရုသင်းကို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။ခရုသင်းမူတ်တဲ့အတတ်ပညာကိုကောဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။
ဖြေ.........အင်္ဂလိပ်လို conch လို့ခေါ်ပါတယ်။ခရုသင်း မှုတ်တဲ့ပညာရပ်ကိုတော့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးထဲမှာ သုံးနူန်းတာမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။ခရုခွံတို့လိုယောက်သွားခွံတို့လိုအခွံမာတွေကို လေ့လာတဲ့ပညာရပ်တော့ရှိပါတယ် conchology လို့ခေါ်ပါတယ်။
မေး........တောရတည်ဆောက်တဲ့ ရဟန်းတွေထဲမှာတချိူ့ ရဟန္တာ ဖြစ်ကျတယ် အဘိဥာဏ်ရပြီး ဈာန်ပျံနိုင်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်။တောရကျောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ၊ရဟန္တာ ကိုဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ၊ဈာန်ပျံတာကို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။
ဖြေ.........ရဟန္တာကို Archat လို့ခေါ်ပါတယ်။တောရကျောင်းကိုတော့ Cloister လို့ခေါ်ပါတယ်။ဈာန်ပျံတယ်ဆိုတာကတော့ မြေဆွဲအားကိုဆန့်ကျင်ပြီး လေထုထဲ လွင့်ပျံတဲ့သဘောပါပဲ Levitation လို့ခေါ်ပါတယ်။
မေး.....ခိုးရာလိုက်တာ၊ကျောရရုံကြံတာ၊အပျိူရည်ပျက်တာကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။
ဖြေ......ခိုးရာလိုက်တာက Elope ချစ်သူနဲ့အဝေးကိုထွက်ပြေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ၊ကျောရရုံကြံတာကို Philander လို့ခေါ်ပါတယ်။ကြံသူကိုတော Philanderer လို့ခေါ်ပါတယ်။အပျိူရည်ပျက်တာကိုတော့ Deflower လို့ခေါ်ပါတယ်၊ပန်းဦးချွေတဲ့သဘောပါပဲ။Defloration ကတော့အပျိူရည်ဖျက်ခြင်းပါပဲ။
မေး....လူမှာပေါက်တတ်တဲ ၀က်ခြံနှင် ကြွက်နို့ကို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲပြီးတော့ဘောက်ကိုဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ
ဖြေ.......၀က်ခြံကို Pimple ကြွက်နို့ကို Wart ဘောက်ကိုတော့ Dandryff လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒက်ကိုလဲ အဲ့လိုသုံးတာတွေ့ဘူးပါတယ်၊၀က်ခြံနဲ့ပက်သက်ပြီး Pimple ကို Pimp လို့မသုံးမိပါစေနဲ့ Pimp ဆိုတာ ဇိမ်ခေါင်းပါ။
ဖြေ........ယောက်ချိူဇွန်းကို အင်္ဂလိပ်လို Ladle လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဖြေ.......ငရုတ်ကျဉ်ပွေ့ကို Pestle လို့ခေါ်ပါတယ်။ငရုတ်ဆုံကိုတော့Mortor လို့သုံးလေ့ရှိပါတယ်။စစ်သုံးအမြှေက်ငယ်တမျိူးနဲ့ စာလုံးပေါင်းအတူတူပါပဲ။မိန်းမနဲ့ရန်ဖြစ်လို့ ငရုတ်ဆုံနဲ့အထုခံရရင် Mortor နဲ့အထုခံရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
မေး......ထန်းရည်ရယ် ဘဲမဟုတ်တဲ့ မန္ဒာလီ ရယ် ဖွတ် ရယ်ကို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ
ဖြေ......ထန်းရည်ကို Toddy လို့သုံးတာတွေဖူးပါတယ်၊ဓနိရည်ကိုလဲ အဲ့လိုသုံးပါတယ်၊ဘဲမဟုတ်တဲ့မန္ဒာလီကိုတော့ Muscovyduck လို့ခေါ်ပါတယ်။ဖွတ်ကို Lguana လို့ခေါ်ပါတယ်။Muscovy ဆိုတာရှရုတွေကိုခေါ်တဲ့ရှေးဟောင်းစကားလုံးပါ။
ဖြေ..........စာခြောက်ရုပ်ကို Scarecrow လို့ခေါ်ပါတယ်။လောက်စာလုံးကိုတော
မေး.........သိကြားမင်းကို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ ပြီးတော့နတ်သုဒ္ဓါ ကိုကော ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။
ဖြေ.........သိကြားမင်းကိုအင်္ဂလိပ်လို Indra လို့သုံးပါတယ်။နတ်သုဒ္ဓါ ကိုတော့ Nectar လို့ခေါ်ပါတယ်၊မက်မုန်သီးတမျိူးရဲ အမည်ဖြစ်တဲ့ Ambrosia လို့လည်းသုံးနူန်းလေ့ရှိပါတယ်။
ဖြေ.........paper flower လို့တော့ မလုပ်နဲ့ဗျာ Bouainvillea လို့ခေါ်ပါတယ်။
မေး......စကားပြောတတ်အောင်သင်လို့ရတဲ့ သာလိကာနဲ့ကတ္တ၀ါကို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။
ဖြေ.......သာလိကာကို Grackle လို့ခေါ်ပြီကတ္တ၀ါ ကိုတော့ Cockatoo လို့ခေါ်ပါတယ်။
မေး.......တချိူ့မိန်းမတို့ လင်ယောက်ကျားကို ပတ်ချွဲနှပ်ချွဲ လုပ်တာရယ် နားပူနားဆာ လုပ်တာရယ် ကို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။
ဖြေ.......နားပူနားဆာလုပ်တာကို Badger လို့ခေါ်ပါတယ်။ပတ်ချွဲနှပ်ချွဲ လုပ်တာကိုတော့ Wheedle လို့ခေါ်ပါတယ်။ Badger ဆိုတာ ခွေးတူဝက်တူကိုလဲ အဓိပ္ပါယ် ရတယ်ဗျ။
Posted by linnzawhtike at 6/01/20120comments